Wafti Kasocday Midawga Yurub Oo Booqday Sitti - Cakaara News
Wafti Kasocday Midawga Yurub Oo Booqday Sitti
Diridhaba ( Cakaaranews ) Jamce, 8da April 2016. Wafti balaadhan oo dhinaca dalka uu hogaaminayo wasiirka xafiiska kahortaga iyo udiyaargarawga masiibooyinka ee JDFI mudane Mitiku, dhanka deegaankana Mw kuxigeenka ahna wasiirka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka, dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar, dhanka midawga yurubna komishineerka xaaladaha bini’aadamtinimo ee midawga yurub oo ay weheliyaan hay'adaha deeq bixiyeyaasha yurub ugu sareeya ayaa booqday xaalada abaarihii ay keentay isbadalka cimilada ee gobolka sitti iyagoo gaar ahaana soo indha-indheeyay Shiniile iyo qabalaha Gaad.
Hadaba Mw kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar ayaa sheegay in booqashadan oo qaadatay mudo 2 maalmood ah ay maanta soo gabagabawday iyadoo waftiga midawga yurub ay xaqiiqsadeen saamaynta dhibaatada ay abaartani u gaysatay dad iyo duunyaba iyo sida adag ee ay xukuumada federaalka iyo ta deegaankuba ula tacaaleen nolosha bulshada iyo xoolahoodiiba. Halkaas oo ay mahad balaadhan uga soo jeediyeen xukuumada dalka iyo deegaankaba.
Booqashadii kadib, ayaa waxay waftiga midawga yurub kasocday ugu deeqeen si wax looga qabto xaalada abaaraha miisaaniyad dhan 139.3 milyan oo doolar.
Waxaana mahad balaadhan halkaa uga soo jeediyay waftigii kasocday dhinaca dalka oo uu ugu horeeyo wasiirka xafiiska kahortaga iyo udiyaargaarawga masiibooyinka JDFI oo uu weheliyo Mw kuxigeenka ahna wasiirka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal.
Ugudanbayna, waftigii midawga yurub ayaa waxaa loo sii dhaweeyay gagida diyaaradaha caalamiga ah ee diridhaba si ay uga socdaalaan.